Vaovao - Fironana miova
Ireo toetran'ny SPC voarindra tsara — indrindra ny toetrany tsy misy rano — dia teboka fivarotana lehibe ho an'ny RSA. Aseho ny Pro12 an'ny Axiscor.
Ny fizarana LVT, ilay mpikatroka mavesatra amin'ny fitomboan'ny resilient, dia nahita fiovana lehibe nitranga tamin'ny taona 2019. Nanomboka tamin'ny fihenan'ny tsindry mora azo ka hatramin'ny fitomboan'ny fotony henjana ary ny SPC sy ny fanjonoana ny subsegment WPC, ny LVT dia nitaingina singa vaovao maro.
"Ny SPC no sokajy haingana indrindra mitombo noho ny hatsarana kanto, fananana tsy tantera-drano, fanoherana ny fiantraikany, fitoniana refy ary lanjany ankapobeny," hoy i Ana Torrence, mpitantana sokajy mafy, Engineered Floors. "Ireo toetra ireo, miaraka amin'ny fanamorana ny fametrahana azy, dia nanafaingana ny fitomboan'ny lazan'ity sokajy ity amin'ny fotoana iray izay tsy ampy ny mpiorina mahay."
Manaiky ny mpanara-maso ny indostria, ny SPC dia mandray anjara voalohany amin'ny sehatra hafa noho ny toetra mampiavaka azy. "Ny telo lehibe dia ny fitoniana amin'ny lafiny hafa, ny telegraphing ary ny mari-pana," hoy i Jeff Francis, talen'ny sokajy mahazaka, fizarana fonenana, Shaw Industries. "Ary mitohy hatrany ny fampisehoana azy io. Tsy mieritreritra izahay fa vita ny SPC - mbola eo amin'ny tsingerin'ny fitomboana isika alohan'ny hahatongavan'ny tsingerin'ny fiainana ary manomboka mipoitra. Tsy hitako ny fiovana mandra-pahatongan'ny fanavaozana lehibe iray hafa."
FCNews ny fikarohana dia mampiseho fa tao anatin'ny herintaona, ny subsegment dia nitombo avo roa heny amin'ny habetsaky ny vola ary mihoatra ny avo roa heny amin'ny resaka dolara. Raha ny fikarohana natao dia mitentina 37,1% ny tsenan'ny LVT amin'ny resaka dolara onenana na $ 1,126 miliara, raha oharina amin'ny $ 490 tapitrisa tamin'ny taona 2018. Raha ny volan'ny trano fonenana, ny SPC dia 33,4% amin'ny tsenan LVT na 667,5 tapitrisa toradroa, raha oharina amin'ny 335,5 tapitrisa toradroa amin'ny taona 2018.
Ny fihodinan'ny SPC amin'ny mpifaninana WPC dia miharihary amin'ireo isa ireo. FCNews Asehon'ny fikarohana fa ny WPC dia nidina 17,4% amin'ny resaka dolara ka hatramin'ny $ 929 tapitrisa tamin'ny taona 2019, raha oharina amin'ny $ 1,125 miliara tamin'ny taona 2018. Raha ny habetsaky ny volany, ny WPC dia nidina 16% hatramin'ny 429 tapitrisa metatra toradroa tamin'ny taona 2019, raha 511 tapitrisa metatra toradroa tamin'ny taona 2018.
"Ny fampiasam-bola kely tsy misy ilana azy [resilient] dia ny fitomboan'ny fahaizan'ny WPC mitombo," hoy i Ed Sanchez, filoha lefitra misahana ny vokatra, Mohawk Industries. "Eran-tany, heveriko fa hahita olona mijery ny famindrana ny fanamboaran-dry zareo avy amin'ny WPC ka hatrany amin'ny SPC. Vitsy dia vitsy ny intro SKU vaovao natao teny amin'ny habakabaka no tao amin'ny WPC. Izany no fironana izay hitohy mandra-pahitantsika ny fanavaozana manaraka."
Rehefa nampitaha ny WPC vs. SPC i Kurt Denman, tompon'andraikitra amin'ny marketing, Kongoley, dia nilaza hoe: "Tsy mifanakalo varotra toa ny WPC ka hatramin'ny SPC ianao, saingy amin'ny vidiny tsara lavitra no ahatongavanao. Ka heverinay fa mbola hitohy izany ho sokajy mitombo ary hamindra ny WPC rehetra mankany amin'ny SPC. "
Nanazava i Mohawk's Sanchez fa ny toetra mampiavaka ny WPC vs. SPC dia nanjary hitan'ny mpanjifa maro izay nanomboka ny fivelivezena naharitra dimy ka hatramin'ny enin-taona tamin'ny taona 2019. "Hitan'izy ireo fa ny WPC, na dia tsara tarehy aza, dia tsy nanana faharetana mitovy amin'ny an'ny SPC vaovao, "hoy ny fanazavany. "Noho izany, hitanao fa misy data marobe miverina avy amin'ireo mpanjifa izay— taorian'ny fifindrana vata fampangatsiahana sy fandriana mavesatra — dia mahita dents. Izany dia miteraka fahatsiarovan-tena bebe kokoa, ary ny SPC dia manome anao ny tombontsoa rehetra [an'ny WPC] miampy ny famahana ny ireo olana ireo. "
Fotoana fandefasana: Dec-28-2020